MDC Chinhoyi Congress
MDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa inoti icharatidzira svondo rinouya nemusi weChishanu mudunhu reMashonaland West, uye yakatozivisa mapurisa nemusi weChishanu kuti ndizvo zvayaronga kuita.
VaMagunje vanotiwo kurambidzwa kuratidzira kuri kuitwa nemapurisa kunotyora mitemo yenyika uye mapurisa ndiwo ari kutotyora mutemo nekurambidza kuratidzira.
VaMagunje vanoti nhengo dzavo hadzisi kutya kusungwa sezvo kuratidzira iri kodzero yavo vachiti vacharatidzira kunyange mapurisa akavarambidza.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumapurisa mudunhu reMashonaland West, kana vatambira chiziviso cheMDC.
Asi nyanzvi munyaya yezvematongerwo enyika uye vari mwana weimwe nhengo yakavamba bato reZanu PF, VaGeorge Nyandoro, VaIsrael Nyandoro, vanoti zviri kuda kuitwa neMDC zvakafanana nemunhu ari kuteya nzou neriva.
VaNyandoro vanoti kuratidzira chete hakusi chete kunoita kuti vanopikisa vanzvikwe nehurumende.
Asi mumwe mugari wemuChinhoyi uyo asina kuda kuzivikanwa nezita anoti kuratidzira kuri kurongwa mudunhu reMashonaland West hakubudirire nekuda kwekushandiswa kwemapurisa zvine chisimba.
Bato reMDC rakarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare uye nhengo dzaro dzinosanganisira sachigaro webato, Muzvare Thabitha Khumalo, pamwe nemurongi wemisangano mubato iri, VaAmos Chibaya, vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira.
VaChibaya vakamiswa pamberi pedare nezuro muHarare vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Chikumbiro chavo chichanzikwa zvakare neMuvhuro sezvo hurumende iri kuti vakapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, VaChibaya vanogona zvakare kupara imwe mhosva.
MDC inoti iri kuronga kuratidzira sezvo isiri kufara nemabatirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, avo inoti haivacherechedzi semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatsigira zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvokuti VaMnangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.